जर्मनीविरुद्ध गोल गर्ने २२ वर्षिय ‘चकी’ को हुन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
जर्मनीविरुद्ध गोल गर्ने २२ वर्षिय ‘चकी’ को हुन् ?
२०७५, ४ असार सोमबार
रसियामा जारी विश्वकप अन्तर्गत आइबार राती भएको खेलमा मेक्सिकोले ऐतिहासिक जित निकाल्यो । ३३ वर्षपछि मात्रै मेक्सिकोले जर्मनीविरुद्ध जित निकालेको हो ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीलाई हराउँदा अहिले मेक्सिकोको व्यापक चर्चा छ । मेक्सिकोले जर्मनीलाई मस्कोमा भएको खेलमा १-० ले हराएको हो ।
जर्मनीसँग उसको यो समग्रमा १२ औँ भेट थियो । यसअघिका ११ भेटमा एक पटक मात्रै मेक्सिकोले जितको स्वाद चाख्न पाएको थियो, त्यो पनि ३३ वर्षअघि ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप फुटबलः कुन खेलाडीको कुन पक्ष मन पर्छ ? सेलिब्रेटीका राेजाइ यस्ता छन्
मेक्सिकोको जितमा २२ वर्षिय हिरभिङ्ग लोजानो हिरो बने । उनले ३५ औँ मिनेटमा गरेको गजब गोल विश्वकपमा मेक्सिकोले जर्मनीमाथि दर्ता गरेको जितको सुखत इतिहास बन्यो ।
सन् १९९५ को जुलाई ३० मा जन्मिएका उनको निकनेम साथीहरुले ‘चकी’ राखेका छन् । उनै चकीले मेक्सिकोबाट आफ्नो २९ औँ खेलमा ८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरे र यो उनको पहिलो विश्वकप गोल पनि हो ।
याे पनि पढ्नुस रोनाल्डोको ह्याट्रिकले पनि जित्न सकेन पोर्चुगल, खेल बराबरीमा
उनी क्लब फुटबलमा पिएसभी एन्थोभेनबाट खेल्छन् । उनले गएको सिजन क्लबका लागि १५ गोल गरेका थिए । उनी खेलको म्यान अफ दि म्याच पनि भए ।
आइतबारको खेल विश्वकपमा यी दुई टोलीबिचको चौथो भेट थियो । यसअघिका दुई खेलमा सीधै हार र एक खेलमा मेक्सिको जर्मनीसँग पेनाल्टीमा हारेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप फुटबलः आज मेस्सीले जादू देखाउलान् ? अर्जेन्टिना भर्सेस क्रोएसिया !
तर रुस विश्वकपले मेक्सिकोको त्यो अधुरो वा अपूरो सपनालाई विपना बनायो, त्यो पनि जर्मनी साबिक विजेताका रुपमा प्रतियोगितामा रहेको वर्ष पहिलो खेलमै ।
ट्याग्स: Fifa world cup 2018, Mexiko, चकी
सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा महिला स्वयंसेविकाहरूको भूमिका महत्वपूर्णः दाहाल
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : ४ दशकअघिको पोखरेलीको सपना एक वर्षमा पूरा हुँदै
कोरोनाको खोप प्रयोग गर्न दिनेमा दोस्रो बन्यो बहराइन
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि ३० बिघा जग्गा अधिग्रहण